Global Voices teny Malagasy » ‘Tsy Hitolo-batana Izahay’: Feon’ny Mpanohitra Manohana Ny Media Nataon’i Tiorka Fahirano · Global Voices teny Malagasy » Print
‘Tsy Hitolo-batana Izahay': Feon'ny Mpanohitra Manohana Ny Media Nataon'i Tiorka Fahirano
Voadika ny 21 Novambra 2016 10:28 GMT 1	 · Mpanoratra Mel Plant Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tiorkia, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Pejy fandraisan'ny Cumhuriyet tamin'ny 7 Novambra.
Vao telo volana mahery izay no lasa hatramin'ny nisian'ny fikasana hanongam-panjakana tao Torkia izay niteraka famoretana miely patrana tamin'ireo lazaina fa mpanohana an'i Fethullah Gülen, mpitondra fivavahana Islamika monina ao Etazonia izay nampangain'ny governemanta Tiorka fa aditoha mikotrika ny fikasana hanongam-panjakana mihoso-drà tamin'ny 15 Jolay.
Na dia vitsy ao Torkia aza no manontany ny fifandraisana eo amin'i Gülen – mpiara-dia taloha tamin'ny filoha Recep Tayyip Erdogan izay lasa mpifanandrina mahery vaika – sy ny mpiray tsikombakomba voalohany, nopetahan'ireo olo-malazan'ny fanoherana anarana hoe “fanadiovana” ny fampielezan-kevitra fanadiovana taty aoriana nataon'ny governemanta.
Nikendry ny media tsy miankina sy ny miaramila, mpiasam-panjakana sy ny mpanao politika mpanohitra izany fanadiovana izany.
Gazety Cumhuriyet – tsilo manindrona ny governemanta
Tamin'ny 31 Oktobra, nanao bemidina  tao amin'ny foiben'ny Cumhuriyet, gazety mpivoaka isan'andro miisa 50.000 mahery manerana an'i Torkia, ao Istanbul ny polisy. Ankoatra ny bemidina tao amin'ny birao, nosavaina ny tranon'ireo 13 mpitantana ny gazety ary nosamborina koa ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra Murat Sabuncu.
Voampanga ho “nahavita heloka tamin'ny anaran'ny FETO sy nyPKK, fikambanana mpampihorohoro, kanefa tsy mpikambana ao amin'izany” ireo mpiasan'ny Cumhuriyet voafonja. FETO (Fikambanan'ny Mpampihoroho Fethullah Gülen) no anaram-bositra nomen'ny fanjakana Tiorka ho an'ny hetsika Gülen Hizmet ( ‘Servisy’).
Tsy mahagaga ny olona ny fanafihana ny gazety taorian'ny fiharatsian'ny fahalalahan'ny gazety ao Torkia.
Laharana faha-151 amin'ny tondro momba ny fahalalahan'ny gazety manerantany  navoakan'ny Reporters Without Borders i Tiorka. Azo inoana fa hihemo-daharana amin'ny taona hoavy ny firenena, noho ireo mpanao gazety 127 voasambotra teo anelanelan'ny fanafihana vao haingana sy ny fikasana hanongam-panjakana tamin'ny Jolay. Mpanao gazety hafa ihany koa no niharan'ny fandraràna tsy hivezivezy.
Andro iray mialoha ny fanafihana ny Cumhuriyet, maro ireo fikambanam-baovao Kiorda lasibatra ihany koa. Nakatona ny gazety tokana amin'ny teny Kiorda ao Tiorka, Azadiya Welat, tahaka izany ihany koa ireo sampam-baovao DIHA sy JINHA
Nahasarika ny sain'ny iraisampirenena tamin'ny 2015 ny Cumhuriyet taorian'ny namoahany fanadihadiana momba ny fizarana fitaovam-piadiana ho an'ny vondrona jihadista ao Syria, izay voalaza fa narahan'ny MIT sampam-pitsikilovan'ny fanjakana Tiorka maso.
Nitondra tany amin'ny fotoam-pitsarana nitoriana an'i Can Dundar, lehiben'ny tonian-dahatsoratra teo aloha tao amin’ ny gazety, sy Erdem Gul, lehiben'ny birao ao Ankara izany fanadihadiana izany. Tamin'ny volana Mey  tamin'ity taona ity, nahazo sazy dimy taona mahery an-tranomaizina i Dundar sy Gul. Navela handao ny fonja miandry ny fitsarana ambony i Dundar, izay tafala tamin'ny fikasana famonoana tao ivelan'ny trano fitsarana, ary monina ao Alemaina ankehitriny. Niala  tsy hoe lehiben'ny tonian-dahatsoratra intsony izy, raha mbola miandry ny valin'ny fangatahana fitsarana ambony ao Torkia kosa i Gul.
Tamin'ny Septambra lasa teo, azon’ ny gazety miaraka amin'ny Satropotsy, ny loka Right Livelihood, fantatra kokoa amin'ny anarana “Loka Nobel Alternative”.
Nanambara ny fanontana nivoaka tamin'ny 1 Novambra tamin'ny pejy fandraisan'ny Cumhuriyet hoe ‘tsy hitolo-batana izahay”, izay mitovy amin'ny antsoantson'ny famoriam-bahoaka ho amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ao Torkia, ary nanomboka nalaza avy hatrany tao amin'ny Twitter.
Cumhuriyet'in yarinki manseti…
—Serkan Ocak (@serkanocakkk) October 31, 2016 
Pejy fandraisan'ny Cumhuriyet rahampitso
Navelan'ny gazety ho fotsy (banga) ny takelaka matoandahatsoratr'i Hikmet Cetinkaya sy Kadri Gursel, samy notanana tamin'ny 31 Oktobra.
Anisan'ireo notanana ihany koa i Bülent Utku, mpisolovavan'ny gazety, mpanao gazety malaza Aydin Engin sy mpanao sariitatra  Musa Kurt.
Here's a painful look inside today's Cumhuriyet. Columns of writers taken by police left blank. Price for speaking truth to power… #Turkey 
— мустафа яылмаз (@MustafaEdlib) November 1, 2016 
Ity ny ao anatin'ny Cumhuriyet amin'izao fotoana izao, mampangorintsina. Fotsy (banga) ny takelaka ho an'ireo mpanoratra. Vidin'ny filazana ny marina amin'ny fitondrana… #Turkey 
Sokajiana toy ny iray amin'ireo gazety vitsy mpanohitra sisa ao Tiorka ny Cumhuriyet. Raha natanjaka be tamin'ny hevitra repoblikàna tsy ara-pivavahana ny gazety nandritra ny taom-polo, izay mpanohana ny mpanohitra lehibe indrindra Antokom-bahoaka Repoblikana (CHP) no tena mpamaky azy, nanjary toerana ho an'ny liberaly kokoa sy ny feo ankavia ny Cumhuriyet.
Niteny  nanohitra ny fisamborana ireo mpanao politikan'ny CHP.
Asked why he is detained veteran journo Aydın Engin replies “I’m working for Cumhuriyet isn’t it enough” Engin was a victim of 1980 coup too
— Ezgi Basaran (@ezgibasaran) October 31, 2016 
Nanontaniana ny anton'ny nitànana azy, namaly ilay menavazana Aydın Engin fa “miasa ao amin'ny Cumhuriyet aho, tsy ampy ve izany” lasibatry ny fanonganam-panjakana 1980 ihany koa i Engin
Gördük, duyduk, biliyoruz; bu diktatörlüktür! Ama biz #TeslimOlmayız 
—Halkevleri (@Halkevleri) October 31, 2016 
Nahita izahay, nandre izahay, mahafantatra izahay, fitondrana jadona ity! Saingy tsy hitolobatana izahay.
Taorian'ny nivoahan'ny vaovao mikasika ny fanafihana, nivory mba hanao fihetsiketsehana tao amin'ny foiben'ny gazety ao Istanbul ireo mpamaky sy mpanohana ny Cumhuriyet. Voatifitry ny tafondro-drano ireo mpanao fihetsiketsehana ary mpianatra fito no notanana , na dia navotsotra aza izy ireo avy eo
Readers of @cumhuriyetgzt  in front of newspaper building to show solidarity amid police raid & detention of writers. pic.twitter.com/xWfzFb6cWj 
— Turkey Untold (@TurkeyUntold) October 31, 2016 
Mpamaky ny @cumhuriyetgzt  eo anoloan'ny tranoben'ny gazety mba hampiseho firaisan-kina manoloana ny fanafihana ataon'ny polisy sy ny fihazonana ireo mpanoratra.
Tsy navela  hahazo mpisolovava ara-dalàna ireo mpitantana sy mpiasan'ny gazety nogadraina. Narahin'ny fandraràna fitantaràna momba ny fisamborana ihany koa ny fanafihana.
Miampanga ny gazety ho manohana ireo mpikatroka mpomba ny fahaleovantena ao amin'ny PKK Kiorda sy ny Gulenista ny fanjakana, fiampangana izay nolavin'ny mpitantana sy ny mpiasan'ny gazety.
Tamin'ny fanontàna pirinty ireo lahatsoratra manohitra ny governemanta taorian'ny fikasana hanongam-panjakana, nilaza izy ireo fa “[nitarika] fkorontanam-bahoaka mifanaraka amin'ny tanjon'ny Fikambanan'ny Mpampihoroho Fethullahist (FETÖ)” ny Cumhuriyet 
Tezitra ny lehiben'ny mpanolo-tsain'i Erdogan:
Terör propagandası yapmak asla GAZETECİLİK değildir. Dünyada hiçbir devlet terör propagandası ve terörle işbirliğine müsade etmez.
— Mustafa Varank (@varank) November 1, 2016 
TSY ASA FANAOVAN-GAZETY ny fanaovana fampielezan-kevitra fampihorohoroana. Tsy misy fanjakana eto an-tany hamela fampielezan-kevitra fampihorohoroana sy fiarahamiasa amin'ny mpampihorohoro.
Tamin'ny endriny maro ny fanentanana mamely ny Cumhuriyet. Tamin'ny 2 Novambra, nanoratra tao amin'ny Sabah, gazety akaiky ny antokon'ny fitondrana, antokon'ny Fampandrosoana sy ny Fahamarinana (AKP) ny mpanoratra iray tsy fantatra anarana milaza  fa mpiasa taloha tao amin'ny gazety, nilaza izy fa nahazo fanampiana ara-bola goavana avy amin'ny fikambanana mifandray amin'ny Gulen ny Cumhuriyet tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Nanokatra  fanadihadiana mikasika izany fanambarana izany ny Birao Misahana ny Famotoroana Heloka Bevava Ara-bola.
Mpaneho hevitra maro samihafa, anisan'izany ny depiote AKP teo aloha Resul Tosun , izay nilaza fa tsy naneho mazava ny fanohanana ny Gulenista mihitsy ny fanambarana. Nanamarika mihitsy aza ny sasany fa ilay mpanao gazety voasambotra Hikmet Cetinkaya no mpanoratra ireo boky maromaro mitsikera an'i Gülen, na dia tsy nanakana ny Sabah hiampanga ny fiovan'i Cetinkaya hiaro ny Gulenista aza izany.
Gülencilere 2002'de terörist diyen Cumhuriyet'i Fetocu ilan ettiler. Kim mi? Feto'ya Muhterem Hoca Efendimiz diyen ikiyüzlüler!
—Cehennem Yakiti (@ateistbelgin) October 31, 2016 
Nambara ho FETO ny Cumhuriyet, izay niantso ny Gulenista fa mpampihorohoro tamin'ny taona 2002. Mpihatsaravelatsihy ireo izay miantso ny FETO ho “Mpampianatray Mendrika’ !
[Hoy ny vakin'ny lohateny: Fikambanana mpampihorohoro ny Gulenists]
Mahatsikaiky, natao famotorana noho ny fifandraisana amin'i Gulen ihany koa ny iray amin'ireo mpampanoa lalàna voatendry hisahana ny raharaha Cumhuriyet. Misokatra  ankehitriny ny fanadihadiana momba ny fampihorohoroana hanenjehana ilay mpanao gazety, Baris Pehlivan namoaka ity rohy ity.
Tamin'ny volana lasa, namoaka lahatsoratra ny Cumhuriyet izay milaza  fa niezaka hifehy indray ny gazety ireo mpitantana teo aloha.
Anisan'ireo miampanga ny gazety ho mifandray amin'i Gulen ireo mpitantana ny gazety teo aloha, Alev Coskun sy Mustafa Balbay, izay solombavambahoakan'ny CHP ankehitriny. Nitory noho ny fanovana birao 2013 izay nanilikilika  azy mirahalahy i Coskun, heverina  noho ny tolo-tsain'i Erdogan.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/21/91664/
 nanao bemidina: http://www.aljazeera.com/news/2016/11/turkey-detains-top-staff-opposition-cumhuriyet-daily-161101043111174.html
 fahalalahan'ny gazety manerantany: https://rsf.org/en/ranking
 October 31, 2016: https://twitter.com/serkanocakkk/status/793169173010669568
 mpanao sariitatra: https://www.cartooningforpeace.org/en/soutiens/turkish-cartoonist-musa-kart-detained-by-police-along-with-journalists-from-opposition-newspaper-cumhuriyet/
 November 1, 2016: https://twitter.com/MustafaEdib/status/793344498982092800
 October 31, 2016: https://twitter.com/ezgibasaran/status/792991709592444928
 October 31, 2016: https://twitter.com/Halkevleri/status/793140673025347584
 October 31, 2016: https://twitter.com/TurkeyUntold/status/793027167412228097
 Tsy navela: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/625781/Gazetemiz_yonetici_ve_yazarlarimiza__avukat_yasagi_kaldirildi.html
 November 1, 2016: https://twitter.com/varank/status/793422000685453313
 Resul Tosun: http://www.birgun.net/amp/haber-detay/former-akp-mp-cumhuriyet-is-not-a-supporter-of-feto-how-are-we-to-explain-this-133830.html
 hiampanga : http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/10/31/hikmet-cetinkayada-fetocu-oldu
 October 31, 2016: https://twitter.com/ateistbelgin/status/793027369141362688